Ihe ịma aka Readinggụ Ihe Ntanetị YouTube Na-amalite Iji Nweta Njikọ Aka-Ọdee Akwụkwọ
Ebumnuche YouTube Africa Chagụ na-ebuli profaịlụ nke akwụkwọ Afrika n'Africa
YouTube ebidola ihe ịma aka ọgụgụ mbụ nke YouTube Africa Reading, marathon na-agụ n'ịntanetị nke ndị edemede, ndị mmetụta na ndị isi echiche gafere n'Africa.
Na ntinye aka inye aka ikwuputa oru ndi ode akwukwo n’Afrika, ndi mmadu a guru ihe ndi ozo sitere na nwunye ndi nwunye Segi, akwukwo nke onye Naijiria bu onye Afrika bu Lola Shoneyin.
Akwụkwọ a bụ ihe ọ entertainụ, nghọta na nghọta na-akọwa banyere ịlụ karịa otu nwanyị ugbu a na Naịjirịa.
Ọ na-ekpughe mgba, esemokwu, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ezinụlọ dị mgbagwoju anya, na mmekọrịta nke mmadụ na mmekọrịta n'ime ụwa dị mgbagwoju anya nke njikọ otu nwanyị.
Akwụkwọ akụkọ ahụ pụtara dịka nhọrọ kachasị elu nke ndị Africa na nyocha Google Africa mere na July gara aga, bụ nke jụrụ ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi ọha na eze akwụkwọ nke onye edemede Africa ga-achọ ịhụ ka ha gụọ na YouTube.
Onu ogugu mmadu 40 n'ofe Afrika ka ahoputarala ka ha malite YouTube YouTube Chama Aka Readinggụ, ma ga-agụ na ibe ya, na-agba ndị ọzọ ume isonyere ha.
N'ime aha ndị ama ama sonyere ịma aka ọgụgụ bụ:
Ndị edemede na ndị na-akọ akụkọ bụ Muthoni Garland na James Murua, ndị ode akwụkwọ okike bụ Anne Moraa na Aleya Kassam, onye na-eme ihe nkiri na onye nta akụkọ John Sibi-Okumu, onye na-ede uri na onye na-eme ihe nkiri Laura Ekumbo, na onye omee na onye edemede Mugambi Nthiga.
Onye na-ahụ maka mgbasa ozi na onye na-ekwu okwu na-akwado Agatha Amatha, ọkà okwu na-akpali akpali Olujimi Tewe, onye ọrụ ebere na onye edemede Betty Irabor, onye nchịkwa ọrụ na onye nhazi Steve Harris, na onye na-ahụ maka ọrụ na azụmaahịa Muyiwa Afolabi.
Onye na-eme ihe onyonyo na onye na-ahụ maka ọdịmma onwe onye bụ Maps Maponyane, onye mgbasa ozi bụ Penny Lebyane, onye na-eme ihe nkiri na ihe atụ Pearl Thusi, onye na-akọ akụkọ akụkọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya Upile Chisala, na Khaya Dlanga bụ onye na-emeri akara ugo.
Na-ekwu okwu na YouTube Africa Reading Challenge, Nitin Gajria, Onye Nchịkwa Na-achịkwa Google maka Africa, kwuru,
“Anyị nwere obi anụrị maka ihe ịma aka YouTube Africa Reading Challenge. Readinggụ akwụkwọ ọgụgụ bụ ezigbo nka dị oke egwu ma anyị nwere olile anya na mmemme a ga - enyere aka ịme ka ọdịnaala ọgụgụ dị na kọntinent ahụ, ma na - akọwapụta ụfọdụ akwụkwọ edemede pụrụ iche nke ndị ode akwụkwọ Africa, ”
Bookworms nwere ike isonye ihe ịma aka ahụ site na ịkekọrịta vidiyo nke 10-nke abụọ na ọwa mmekọrịta ha, ịgụ otu akwụkwọ ahụ, na ịhọpụta ndị enyi ha ime otu ihe ahụ.
Free ohere na-agụ Nzuzo Ndu nke nwunye Baba Segi bụ maka otu ọnwa site na OneRead ngwa. A na-enye onyinye a kpọmkwem maka ndị na-achọsi ike isonyere ihe ịma aka ahụ, mana ndị na-enweghị ike ịnweta akwụkwọ nkịtị. Naanị ha ga-ebudata ngwa ahụ na Storelọ Ahịa App, wee chọta akwụkwọ ahụ n'okpuru 'Akụkọ na mmelite'.